Tetikasa Famporisihana ireo Cloghers · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2019 15:32 GMT
Phnom Penh, Kambodza – nanatevina laharana ny Rising Voices tamin'ny 2014
Matetika no antsoina am-pitiavana hoe “Cloghers” ieo vehivavy bilaogera ao Kambodza, na izany aza anefa, mbola tena voatokana ho an'ireo mponina an-tanandehibe sy ireo manana fahafahana tsaratsara kokoa mahazo ireny teknolojia ireny ny fanoratana bilaogy.
Ny Cambodian Center of Human Rights (Ivontoerana Kambodziàna ho an'ny Zon'Olombelona) mahita fahafahana manohana cloghers vaovao avy amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra izay efa mianatra ao Phnom Penh amin'izao fotoana izao, izay manana vina tokana ny ho tetezana hampifandray ireo vondrom-piarahamonina any amin'ny faritra ambanivohitra niaviany sy ny renivohitra be olona mifamoivoy. Amin'ny alàlan'ireo atrikasa momba ny fanoratana bilaogy, mizara ny tantarany manokana ireo Cloghers vaovao, ny fomba fijeriny ny toedraharaha mahakasika ny zon'olombelona manerana ny firenena, no sady manangana tambajotra matanjaka miaraka amin'ireo vehivavy hafa mpianatra izay manana fototra mitovitovy aminy.
Fankasitrahana ireo mpandray anjara niaraka tamin'i Sopheap Chak, tale mpanatanteraky ny CCHR . Sary an'ny CCHR.
Nandritra ilay tetikasa naharitra volana enina, 12 teo ho eo ireo cloghers nahavita fiofanana momba ny fanoratana bilaogy, izay tafiditra tamin'izany ny fanampiana traikefa vaovao momba ny famoronana sy fitantanana ny bilaogin'ny tenan'izy ireo manokana, ary hatramin'ny fanoratana torolàlana mba hitantaràny ny tantaran'ny faritra ambanivohitra ao Kambodza. Tamin'ny alàlan'ny fifaninanana manoratra bilaogy, cloghers telo no voafantina noho ny lahatsoratra nosoratan-dry zareo. Tao amin'ny lanonana natao ny Novambra 2014, nahazo ny fankasitrahan'ny Faribolan'ireo Clogher ireo telo nandresy sy ireo rehetra nandray anjara
Raha nifarana ny andiany voalohany, antenain'ny CCHR ny mbola hanokatra fahafahana maro hanofanana cloghers marpmaro kokoa amin'ny hoavy.